पार्वतीको मोही - Choicekhabar.com
Choicekhabar । २०७६ जेष्ठ ३१, शुक्रबार ०३:०५ मा प्रकाशित
– क्षितिज समर्पण
“भोलिदेखि हाम्रो घरमा मोही माग्न नआउनू, बुझिस् ?”
पार्वतीले यसो भनेको दिनभरि मेरो शरीरमा घाम लागेन । आफूले गल्ती गरेकोमा खुब पछुतो लाग्यो ।
हुन त मेरो के गल्ती थियो र ? निहुँ उसैले खोजेकी हो । झगडा हुनुलाई ठूलै बीउ पनि कहाँ चाहिँदो रहेछ र ?
मैले पछाडिपट्टि दुइटा प्वाल परेको हाफपाइन्ट लगाएर स्कुल जानुमा मेरो के गल्ती थियो र ? फाटेको हाफपाइन्टबाट मेरो गरिबी देखिनुमा मेरो के दोष थियो र ? मेरो परिवार गरिब हुनुमा हाम्रो के दोष थियो र ?
बिल गेट्सले भनेका छन् नि, “तिमी गरिब भएर जन्मिनु तिम्रो गल्ती होइन तर तिमी गरिब भएर म¥यौ भनेचाहिँ तिम्रो गल्ती हुन्छ ।”
त्यस दिन प्रार्थना समयमा म पार्वतीको अघिपट्टि थिएँ । ऊ नै मेरो पछाडि आएकी रै’छ, कतिखेर । म त पहिल्यै लाइनमा लागिसकेको थिएँ ।
श्रीमान गम्भीर नेपाली…
राष्ट्रगान चलिरहेका बेला उसले मेरो हाफपाइन्टबाट देखिएको गरिबीमाथि डट्पेनले घोचेर हमला गरिदिई । पछाडि फर्केर हेरेको खुब मज्जाले मुसुमुसु हाँसिरहेकी थिई ।
“अहिले त हाँस् । पख् तँलाई मैले जानेको छु कठेनी,” उठेको रिसलाई थाम्दै मनमनै यत्ति भनेर अगाडि फर्किएँ । पार्वती बेला–बेला यस्ता बिठ्याइँ गरिरहन्थी । ऊ बाहुनकी छोरी, त्यसैले म उसलाई गाली गर्दा ‘कठेनी’ भन्थें ।
म प्रायः अघिल्लो बेन्चमा बस्थें । र, त्यस दिन पनि अघिल्लो बेन्चमै बसें । पार्वतीहरू प्रायः पछाडि नै बस्थे ।
दिउँसो १ बजेको घण्टी लाग्नेबित्तिकै खुर्र दौडेर ढोका बाहिरपट्टि बसें । पार्वती बाहिर निस्किनेबित्तिकै मैले एक मुक्का बजाइदिएँ उसको टाउकोमा । मुक्का उसको कपाल बाँध्ने सेतो क्लिपमाथि प¥यो । मेरो मुक्काले उसको क्लिप दुई टुक्रा भयो । कम्ती गाली गरेकी होइन उसले त्यो बेला । उसले रुँदै अरु के–के गाली गरी, त्यसको कुनै परवाह भएन । तर, जब उसले ‘भोलिदेखि हाम्रो घरमा मोही माग्न नआउनू’ भनी, तब मन खिन्न भयो । हातखुट्टा गलेको जस्तो भयो । बाको कुटाइ सम्झिएँ । मैले स्कुलमा कसैसित झगडा गरेको थाहा पाए भने बाले बेस्सरी पिट्नुहुन्थ्यो । झन् त्यस दिनको झगडाले त भोलिपल्टदेखि हाम्रो घरमा मोही बन्द हुँदै थियो ।
उसको घरमा दुई–तीनवटा भैंसी खाली हुन्थेनन्— लैनो, बर्केना । र, उसको घरमा हरेक दिन मोही बन्थ्यो । बन्थ्यो र त हामीले हरेक दिन मोही खान पाउँथ्यौं । हामीलाई मोहीको बानी परिसकेको थियो । घरमा भैंसी नपालेर पनि मोही खान पाइरहेका थियौं ।
एकपटक बल खेल्ने बेला गाउँले काकासँग स्कुलमा सानो झगडा के भएको थियो, बाले थाहा पाइहाल्नुभएछ । बेलुका घरमा यति कुटाइ खाएँ कि त्यसको कुनै हिसाब छैन । कतिपटक हाफपाइन्टमै तुर्किएको थियो, होसै छैन । सोचें— मैले उसलाई आज हिर्काउनु हुन्थेन ।
उसलाई सम्झाउने कोसिस गरें, “नरो न पार्वती । तँलाई म यस्तै अर्काे क्लिप ल्याइदिउँला । भोलि बा बजार जान्या हुन् ।”
कहाँ मान्थी र विचरी ! झन् हिक्किहिक्की रुन थाली । त्यसपछि किन हो कुन्नि— मलाई उसको छेउमा बस्नै मन लागेन । आँखाका चेपहरू रसाएझैं अनुभूति भयो । मन भक्कानिएलाझैं भयो । दौडेर कक्षाकोठामा गएँ । बाले हाट जाँदा ल्याइदिएको प्लास्टिकको सुर्के झोलामा घोप्टो परेर रोइदिएँ एकछिन ।
हाम्रो घरमा मोही हुँदैनथ्यो । मोही हुनलाई भैंसी पनि त हुनुप¥यो । र, भैंसी किन्नलाई हाम्रो हैसियत पनि त हुनुप¥यो ! गरिब भएपछि कसको के लाग्दो रै’छ र ? मन भएरमात्र नहुने । गरिबीको घट्टले पिसिदिन्थ्यो हाम्रा हर चाहना र रहरहरू । तर, घट्टमा घुन नपिसिएझैं कहिल्यै पनि हाम्रो अभाव पिसेन यो गरिबीको घट्टले । तर, घुमिरह्यो हाम्रो टाउकोमाथि सधैं ।
पार्वतीको परिवार त ठूला मान्छेको परिवार । गाउँभरिका मान्छेले मान्ने परिवार । शायद पार्वतीको घरको ऋण नखाने गाउँमा कोही थिएन क्यारे ! अनि, उसका बा गाउँका प्रधानपञ्च कि वडाध्यक्ष थिए त्यो बेला । उसका घरमा दुइटा लैना र तीन्टा बर्केना भैंसी थिए । दही बेचेर बचेको तरको दैनिक मोही पार्थे । छिमेकी हुनुको फाइदा, त्यो मोहीको पहिलो भागिदार हामी नै हुन्थ्यौं ।
उनीहरू मोही खाँदैनथे । दूध, दही खान्थे । मोही त यसै पनि खेर जान्थ्यो । धन्न हामीले त्यसको सदुपयोग गरेका थियौं । तर, त्यही मोही खाँदाखाँदै हामी यस्ता भएछौं कि मोहीबिना हाम्रो छाक नै खल्लो बन्थ्यो । मलाई याद छ, कुनै दिन घरमा पाहुना परे भने त्यो मोही पुग्दैनथ्यो । अनि, बेलुका मोही राखेको भाँडो पखालेर पनि खाइन्थ्यो ।
कतिखेर पार्वती आएर छेउमै बसेकी रै’छ, पत्तै भएन ।
“ओइ रामे, तो किन रुन्छइ हँ ? तो मइन हान्छइ अझ आफै रुन्छई ? केटा मान्छे भइगिन पुनि रुन्छन् ? तेरो किलिप् भाँचियाको हो र ?”
पार्वतीले यसो भनेपछि रुझेको बिरालोजस्तै बनेर मैले भनें, “तो साँच्चै रिसायाकी होइ माइली ?”
ऊ घरकी माइली छोरी थिई, त्यसैले सबै उसलाई पार्वतीभन्दा पनि माइली नै भनेर बोलाउँथे ।
“छैन, किन रिसाउनू ! तोइसित रिसाइगिन क्या हुन्या हो र ?” उसले भनी, “मइन अर्काे किलिप ल्याइदिएनै भन्या साँच्चै रिसाउनिउ ।”
अब परेन फसाद ! अब मैले उसलाई कसरी क्लिप किनिदिने ? अघि फकाउन बालाई बजारबाट ल्याउन लगाउँछु भनिहालें । घरमा बैनी छैन । कसको लागि भनेर बालाई क्लिप किन्न लगाऊँ ? पार्वतीसित झगडा भएको थाहा पाए भने उल्टै मलाई नै हपार्छन् । पिट्छन् । फेरि हाफपाइन्ट धुनुपर्ने स्थिति आउँछ ।
अब के भनूँ पार्वतीलाई ! क्लिप नल्याइदिएपछि रिसाउँछु भन्छे । ल्याइदिऊँ त कसरी ल्याइदिऊँ ? मनमा कुरा खेलिरहे । सोचें— क्लिप किनेर ल्याउनुभन्दा बरु पैसा नै दिन्छु । ऊ आफैंले किन्छे ।
“म तोइन भोलि रुप्या ल्याइदिउँला, आफै किन्लेई होइ माईली ?” अलि–अलि उसको अनुहारसमेत नहेरेर भनें । उसले ‘हुन्छ’ भनी । ५ रुपैयाँ पथ्र्याे क्यारे त्यो क्लिपलाई । ३ रुपैयाँमा एउटा डट्पेन आउँथ्यो त्यो बेला । ५ रुपैयाँ मेरा लागि सानो बजेट थिएन । घरबाट कसरी ५ रुपैयाँ ल्याउने भन्नेतर्फ सोच्न थालें । अनि पार्वतीलाई भनें, “भोलि ब्यान मोही लिन आऊँ कि नाइ माइली ?”
“आउन त आइज,” उसले पनी, “तर, किलिप् किन्ने रुप्या पुनि ल्याइगिन आउनू ।”
लागिरह्यो— म भोलि पैसा लिएर पार्वतीको क्लिप किन्न होइन, उनीहरूको मलखादमा खेर जाने मोही किन्न जानेछु !
हामी स्कुल जाने बाटोमा बरपीपलका एक जोडी थिए । छेउमा सानो चौतारीजस्तो थियो– ढुंगाको । त्यो चौतारीमा बस्ने विषयमा हाम्रो होडबाजी नै चल्थ्यो । पार्वतीको र मेरो । उसका साथीको । मेरा साथीको ।
६ कक्षा पढ्ने बेलाको कुरा हो क्यारे ! हामीले ५ कक्षासम्म पढेको प्राथामिक विद्यालय छोडेर अर्काे विद्यालय जान थालिसकेका थियौं । तर, हाम्रो केटाकेटीपन र बिठ्याइँ भने उस्तै थियो । पार्वतीको साथले म पनि बिठ्याइँ गर्ने भइसकेको थिएँ । स्कुल दशैं बिदा हुने तरखरमा थियो । एकदिन स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा काउसो फलेको फेला पारें । प्लास्टिकको सहायताले काउसोका दुई केस्रा टिपेर ल्याएँ । प्लास्टिकमै गुटुमुटु पारेर राखें ।
त्यसदिन पार्वतीहरूभन्दा अलि अघि गएँ । त्यही ढुंगाको चौतारीमा लगेर काउसो झारिदिएँ । अनि, चौतारी पुग्नुभन्दा केही मिटर वरै आएर बसें, जहाँनेरबाट हामी चौतारीमा पुग्न होडबाजी शुरु गथ्र्याैं ।
उनीहरू आए । फेरि शुरु भो हाम्रो होडबाजी ।
तर, त्यसदिन मैले हतार गरिनँ किनकि मैले बिठ्याइँ गरेको थिएँ । उनीहरूको पछिपछि दौडेजस्तो गरें । मनमनै हाँसो पनि लागिरहेको थियो । धन्नै खुस्किएको । बडो कोसिसले रोकें । शुरुमा पार्वती बसी थचक्क । मेरो हाँसो खुस्किहाल्यो । पार्वतीले दुवै हातले शरीरको पछाडि बस्ने ठाउँमा बेस्सरी कन्याउन थाली । म भने मरी–मरी हाँस्न थालें । पार्वतीले मतिर आँखा तरी । म भागें ।
“पख् संगुर, तँलाई जान्याइछु,” उसले रिसले घुरेर मतिर हेरी । पार्वती मलाई रिसाएर बोलाउँदा, गाली गर्दा संगुर भन्थी ।
“तेरो हात त भाँचिजाओस् । कीरा परून्,” उसले मलाई सराप्न थाली ।
स्कुलबाट फर्किने बेला त्यही ठाउँमा पुग्दा मेरो हाँसो खुस्किहाल्यो । पार्वतीले उसरी नै आँखा तरी । फर्किंदा पार्वती र ममात्रै थियौं । काउसो राखेको ठाउँभन्दा केही तल पुगेपछि सोधें, “ओइ माइली, ब्यान कौछाले चिल्या बेला तँलाई कस्तो भयाउथ्यो हँ ?”
उसले आफ्नो फ्रक फरक्कै फर्काई र भनी, “ई… यस्तो भएको थियो, देखिस् ?
गाउँमा मिल थिएन । पल्लो गाउँमा रहेको मिलमा तोरी पेल्न जान प्रायः हामीलाई पठाउँदैनथे बा–आमाले । तर, हामी बिस्तारै ठूलो हुँदै थियौं । किशोरावस्थामा प्रवेश गर्दै थियौं, गरेका थियौं । अनि, हामी पनि बेलाबेला मिल, घट्ट र घाँस दाउरा गर्ने कामको लायक भइसकेका थियौं । र, बिदा तथा फुर्सदको समयमा सघाउनुपथ्र्याे हाम्रा बा–आमालाई ।
एकदिन । शायद शनिबार थियो क्यारे ! पार्वती र म मिल गयौं, आमाहरूले तयार पारेको दुई–दुई पाथीको तोरीको भारी बोकेर । हामीसँग छिमेकीको नाता छँदै थियो । पार्वती र म एउटै कक्षाका सहयात्री पनि थियौंं । निकै मिल्थ्यौं पनि । ऊ पढ्नमा मभन्दा तगडा थिई । ऊ कक्षाको पहिलो विद्यार्थी, म दोस्रो । कक्षाका अरू साथीहरू हाम्रो मित्रता देखेर डाह गर्थे । हुन पनि डाह गर्न लायक नै थियो हाम्रो ।
हामी जति झगडा गरे पनि स्कुल जाँदा–आउँदा कहिल्यै छुट्टाछुट्टै आएनौं । सँधै सँगै ।
“त्यो रामे क्या पढ्दो हो,” साथीहरू कुरा काट्थे, “पार्वतीको संगतले दोस्रो हुन्छ ।”
मिलले हाम्रो तोरीलाई निचोरेर तेल निकाल्दै थियो । यो तोरीबाट तेल निकाल्ने काम पनि कम झन्झटको हुन्न । जोखिम पनि उत्तिकै । अलिकति होस् पुगेन भने हात च्वाट्ट काटिदिन्थ्यो मिलको चक्काले । तोरी निचोरिएकै छ । तेल निस्किएकै छ । मिलका मालिक पानी कम आएको भन्दै पानीको मुहानतिर गए ।
मलाई फेरि बिठ्याइँ गर्न मन लाग्यो । पार्वती कामको धुनमै थिई । म उसको छेउमा गएँ । अनि, तेल लपेटिएको हातले पार्वतीको छातीमा उम्रिँदै गरेका दुइटा फूललाई च्याप्प समाइदिएँ ।
“ऐया ! ओइ संगुर, के गरेको ?” पार्वती बेस्सरी चिच्याई । बुरुक्क उफ्रिई ।
म भने फेरि हाँस्न थालें मरीमरी । पछि हेरेको त भर्खर फुल्दै गरेका पार्वतीका फूलबाहिर तेलैतेल भएको रै’छ । स्कुल ड्रेसवाला आकाशे रंगको सर्ट लगाएकी थिई । बाहिरैपट्टि दाग स्पष्ट देखिन थाल्यो ।
यता मिलले तोरी निचोरेर तेल निकालिरहेको थियो । मेरो निचोराइले पार्वतीको छातीको तोरीबाट तेल निस्कियो या निस्किएन थाहा छैन । तर, मेरो तेल लागेका हातले नमेटिने गरी दाग भने लगाइदियो उसको छातीमाथि ।
पार्वती जुरुक्क उठी । मलाई एक लात्ता हिर्काई । दुई मुक्काले पिठ्यूँमा हिर्काई । मेरो कपाल तानिदिई । मैले सब सहिदिएँ । मलाई सहनुमै रमाइलो लागिरहेको थियो किनकि गल्ती मैले नै गरेको थिएँ । विचरी पार्वती सुँकसुँक गरेर रुन थाली । मलाई कुनै दिन पार्वतीले सोधेको प्रश्न उसलाई सोध्न मन लाग्यो, “ओइ पार्वती, किन रुन्छेइ हँ ? तो मइन हान्छेइ, उल्टो आफैं रुन्छेइ ?”
मिलको काम सकियो । हामी फर्कियौं । पार्वती रुनुको रहस्य बल्ल थाहा पाएँ । उसको सलले तोरीको भारी बोकेर ल्याएकी थिई । त्योबाहेक ओढ्ने कुनै कपडा थिएन ऊसँग । अब कसरी छोप्छे उसले आफ्नो छातीको दाग ? अनि, कसैले के भएको हो भनेर सोधे भने के जवाफ देली विचरीले ?
“ओइ रामे, मान्छेले सोध्या भन्या म क्या भनूँ, भन्तो ?” निकैबेरको मौनतापछि ऊ बोली ।
अब मौन हुने पालो मेरो थियो किनकि मसँग यसको कुनै जवाफ थिएन । र, जवाफ दिन लायकै पनि कहाँ थिएँ र म ! म मौन रहें तर चुप रहन सकिनँ । मनभरि मौन कोलाहाल मच्चिइरह्यो । सोचें— पार्वती फेरि रिसाई ।
“यस्तो काम त ब्या गरेपछि मात्र गर्चन् रे,” निकैबेरको मौन हिँडाइपछि पार्वती बोली, “घरमा थाहा पाया भन्या क्या भन्न्या हुन् ? म क्या भनूँला भन्तो ?”
“तो मईसित ब्या गर्छेइ त माइली ?” उसको प्रश्नमा अनायासै मैले यस्तो प्रश्न पो थपें ।
“तो संगुरसित ब्या गरी क्या गन्र्या हो र ?” अलिअलि लजाएझैं, अलिअलि रिसाएझैं उसको जवाफ आयो ।
“अघि ग¥याजस्तो गन्र्या नि,” म जिस्किएँ फेरि ।
“तो संगुरसित ब्या गर्नुभन्दा त बरु कुकुरसित ब्या गर्छु बुझिस् ?”
“कुकुरसित ब्या गरेर छाउरा ब्याउने होइ र माइली ?” म जिस्की नै रहें, “एउटा राम्रो डांगो (भाले बच्चा) मइन राखिद्याई होइ ।”
“डाँगो किन, छाउरी राखिदिउँला नि तो संगुरलाई,” पार्वती पनि जिस्किन थाली, “ठूलो भयापछि ब्या गरी बसलाई ।”
एक बिहान । स्कुल जाने बेला पार्वती निकै मौन रही । अरु दिन जिस्किने, केही न केही बिठ्याइँ गर्ने पार्वती मौन थिई । निन्याउरी थिई । र, देखिन्थी लडाइँ हारेको सिपाहीजस्तो । मैले बोलाउने र जिस्किने हजार कोसिस गरे पनि ऊ मौनै रही । थाहा छैन किन उसले यो मौनताको हतियार प्रयोग गर्दै थिई । मौन रहनुको अर्थ नबोल्नुमात्र होइन । ऊ मौन थिई तर उसका आँखा र अनुहार बोलिरहेका थिए । लाग्थ्यो— उसलाई निकै चोट परेको छ । अथवा ऊ केही भन्न खोजिरहेकी छ ।
ऊ पहिलो पटक महिनावारी हुँदा पनि यस्तै मौन र निन्याउरी भएकी थिई । तर, त्यस दिन उसले मलाई स्कुल नपुग्दै बाटोमा एक्लै बोलाएर सुटुक्क भनेकी थिई यसबारे । अनि मैले जिस्काएको थिएँ, “अब तेरो पनि ब्या गर्ने बेला भइगछ माइली ।”
तर, त्यो दिन उसले स्कुल जाँदा त के, फर्केर बीच बाटोमा आइपुग्दासम्म पनि केही भनिन । म उसको प्रतीक्षामा थिएँ— कतिबेला मलाई एक्लै बोलाउँछे र आफ्नो मनको कुरा भन्छे भनेर । पार्वती आफूमा आइपरेका सानाभन्दा पनि साना कुराहरू मलाई नभनी बस्नै सक्दिनथी । यस्तो लाग्थ्यो— उसको दुःखको पहिलो सहयात्री शायद म नै हुँ ।
“साँझ हाम्रो घर आउनू है,” छुट्टिने बेला पार्वतीले भनी, “आज आइनस् भन्या म तोइसित कहिल्यै बोल्न्या छुइँन ।”
उसको घरमा केही काम पर्‍यो— जस्तोः मकै छोडाउनु पर्‍यो, खेतमा पराल सुकाउनु पर्‍यो या यस्तै यस्तै काम आइपर्‍यो भने ऊ मलाई बोलाउन घरमै आउँथी । म भन्थें, “कद्दु (फर्सी) उस्याउने भया मात्रै आउँछु, नभया आउँदिन ।”
तर, त्यो दिन उसको अनुहारको अघि मैले यस्ता कुरा गर्नै सकिनँ ।
“हामी बसाइ सरेर बर्दिया जान्या भयौं जेठा,” साँझ म उसको कोठामा जानेबित्तिकै मलाई गर्लम्म अँगालो मारेर रुँदै उसले भनी, “अब तोइसितको साथ छुट्टिने भयो ।”
पहाडमा दुःख भयो भन्दै पार्वतीका बाले बर्दिया सर्ने निर्णय गरेका रै’छन् । घरमूलीले निर्णय गरेपछि अरूले नाइनास्ती गर्ने कुरा भएन । झन् त्यो बेला स्वास्नी मान्छेले बोल्नै मिल्थेन यस्ता विषयमा ।
पार्वतीले मलाई पहिलोपटक ‘जेठो’ भनेर सम्बोधन गर्दै थिई । निकै आत्मीय लाग्यो । निकै प्रिय लाग्यो । म घरको जेठो छोरा भएकाले आमाले पनि बोलाउँदा ‘जेठा’ भन्नुहुन्थ्यो ।
“बाले अब सप्पै परिवार उतै जान्या हो भन्छन्,” उसले भनी ।
“उसो भया त मइन बिर्सिन्छेइ होला है माइली ?” कसो–कसो म पनि रोइनँ ।
“तोलाई बिर्सेर म क्यारी बाँचूँला भन्तो ?”
थाहा छैन, त्यो बेला उसले मलाई के ठानी । मबिना बाँच्दिनँ भनी । त्यो माया गर्ने उमेर थियो या थिएन, थाहा छैन । हामी माया–प्रेम बुझ्ने अवस्थामा थियौं या थिएनौं, त्यो पनि थाहा छैन । तर, आज आएर यस्तो लाग्छ— उसले मलाई माया गरेकी रहिछ । जति जिस्किए पनि, जति गाली गरे पनि । र, मैले जति बिठ्याइँ गरे पनि ऊ मलाई मनले माया गर्दिरहिछ । त्यही भएर रहेछ उसले मेरा हरेक गल्तीहरू सहेको ।
मलाई अँगालो मारेर ऊ सुँकसुँक गर्दै रोइरहेकी थिई । म के भनौं के नभनौंको दोधारमा थिएँ । उसको आँखाबाट झरेका आँसु कुमको छेउ हुँदै मेरो ढाडको बाटो ओरालो लागे ।
“राम्रोसित पढ्नू । मइन नबिर्सनू,” पार्वतीले भनी, “म बर्दिया पुग्याँ भन्या तोइन चिठी पठाउँला ।”
मैले पनि रुन्चे स्वरमा भने, “हुन्छ । तेरो चिठी पायापछि म पुनि पठाउँला ।”
यस्तो लाग्दैथ्यो— ऊ मलाई छोडेर उत्तिखेरै बर्दिया जाँदै छे । अनि, परदेश जाँदै गरेको पतिले जस्तो आफ्नो पत्नीलाई सम्झाएझैं सम्झाउँदै थिई मलाई । मानौं म उसको पत्नी हुँ, ऊ परदेश जाँदै छ र मैले सारा घर सम्हालेर बस्नु छ उसको प्रतीक्षामा ।
निकैबेरको अंकमाल र रुवाइपछि उसले मेरो गालामा गहिरो चुम्बन गरी । मन कस्तो–कस्तो भयो । आफू पनि त्यस्तै गरौं कि भन्ने लाग्यो तर मनमा आँट आएन । बरु भित्रै कताबाट लाज लागेझैं भयो । जीवनमा पहिलोपटक बा–आमापछि तेस्रो व्यक्तिको चुम्बन र अंकमाल पाएको थिएँ ।
“अब यही म्वाइँ सम्झेर बस्नू है जेठा,” आँखाको डिलबाट खस्दै गरेका आँसु पुछ्दै पार्वतीले भनी, “न अब हाम्रो भैंसीको मोही पाउँछस्, न त मेरो म्वाइँ ।”
मन कटक्क भयो । उसको घरमा एकछिन पनि बस्न मन लागेन । मलाई पनि रोऊँ–रोऊँझैं लाग्यो तर आँसु रोकें । आफूलाई दह्रो बनाउने कोसिस गरें । र, निस्किएँ उसको घरबाट ।
बिहान पार्वतीका बा हाम्रो घरमा देखिए । मेरा बासित आँगनमा बसेर के–के कुरा गरे, मैले भित्र केही बुझिनँ । गनगन गरेको मात्रै सुनें । एकछिनपछि उनका बाँकी सबै वस्तुभाउ हाम्रो गोठमा ल्याएर बाँधिदिए । धेरैजसो त बेचिसकेका थिए । पछि पार्वतीहरू पनि गुन्टा बोकेर हाम्रै आँगनमा देखिए । उनीहरू बर्दियाँ जाँदै थिए । पार्वतीका पनि आँखा रोई–रोई थाकेका झैं देखिन्थे । शायद, अघिल्लो रातभरि ऊ सुतिनछ क्यारे !
पार्वतीकी आमाले सालको हरियो टपरी मेरी आमाको हातमा दिनुभो । आमा भित्र पस्नुभो । केहीबेरमै परेलाका डिलमा आँसु टिलपिल–टिलपिल पार्दै थालीमा टीका ल्याउनुभो र पार्वतीका सबै परिवारलाई एक–एक गरी लगाइदिनुभो ।
“ल राम्रोसँग जानू । जहाँ भया पनि सुख्खले बस्नू । जिउमा घाउ खटिरा पनि नआऊन् । माटो छोया अन्न र ढुंगो छोया धन होओइ । हामीन नबिर्सिनू,” यति भन्दै गर्दा आमाको गला रोकियो । मानौं उहाँको गलामा हाम्रो घरको ढोकामा भित्रपट्टि लगाउने आग्लोजत्रो काठ अड्किएको छ ।
सबैजना सुँकसुँक रुन थाले । कोही पनि केही बोल्न सकेनन्् । कुनै चलचिलको वियोगान्त दृश्यभन्दा कम थिएन यो दृश्य ।
“बेला बेला यता आउँदै गर्नू,” निकैबेरको मौनतापछि यति भनेर आमा मजेत्रोले आँखा पुछ्दै भित्र पस्नुभो । शायद असल छिमेकी टाढिँदाको चरम पीडाको रापमा जल्दै हुनुहुन्थ्यो होला ।
पार्वतीकी आमा पनि सुँकसुँक गर्दै बाटो लाग्नुभो । पछिपछि पार्वतीहरू लागे । केही पर पुगेपछि पार्वती पछाडि फर्किई । मैले हात हल्लाएँ तर उसले हल्लाइन । मन त हुँदो हो नि तर के गर्नू— उसको पछि बा थिए ।
पार्वतीहरू पर डाँडाको बरको रुखसम्म जाउन्जेल हेरिरहें । केहीबेरमा वरको रुखले छेलिदियो उनीहरूलाई । मेरो आँखाबाट पनि छेलियो एउटा परिवार । धमिलो—धमिलो हुँदै पार्वती पनि क्षितिजमा कतै हराई ।
तर, उसको चिठी अलिहेसम्म पनि आएको छैन ।
“माइली, म तेरो चिठीको पर्खाइमा छु !”